Faritra Menabe: betsaka ireo karazam-boly, saingy tsy ampy ny rano | NewsMada
Faritra Menabe: betsaka ireo karazam-boly, saingy tsy ampy ny rano
Miasa mafy ho an’ny fambolem-bary ny tantsaha any amin‘ny faritra Menabe, mitana 72 % amina velaran-tany volena. Miaraka amin’ny vary, ny katsaka, ny mangahazo sy ny vomanga, saingy amina velaran-tany kely ireny. Faharoa ny voly katsaka ho an’ny olona sy ho an’ny sakafom-biby. Manana anjara toerana lehibe koa ny tsaramaso sy ny kabaro any Miandrivazo sy Belo amoron’i Tsiribihina.
Betsaka amin’ireo vokatra ireo no miakatra aty afovoan-tany, indrindra ny tsaramaso sy ny kabaro. Tsy vitsy ny mpandraharaha nanondrana kabaro tany aloha, saingy tsy hita taratra intsony izany izao hatramin’ny fahanteran’ny seranan-tsambo ao Morondava sy any Morombe, Atsimo Andrefana. Tratry ny aretina “menamaso” ireo vokatra fanondrana ireo taty aoriana, ankehitriny ezahina indray ny mamerina ny lazan’ny vokatra tsaramaso sy kabaro any amin’ny faritra Menabe.
Misongadina ny voly voanjo any Morondava, Mandabe sy Manja, saingy noho ny tsy fisian’ny mpandray izany, hita manomboka mihena io vokatra io ankehitriny. Antony iray koa, mitobaka ny menaka vokarin’ny Tiko vita avy amin’ny soja. Ary mbola manana ny lazany ny voly paraky any Miandrivazo. Olana iraisan’ireo voly rehetra ireo ankehitriny, ny tsy fahampian-drano sy ny fiovan’ny toetr’andro.
Tsy misy rafitra momba ny tsenan’omby
Momba ny fiompiana, manana ny mampiavaka azy ny faritra Menabe, indrindra ny omby. Ny olana anefa tsy ampy fitsaboana izy ireny, raha ny filazan’ny lehiben’ny sampandraharaham-paritra momba ny fiompiana. Mivelona any anaty ala fotsiny ny omby ary ny famonoana azy, saika atao manaraka ny fomba tany. Tsy misy fizahana rafitra manokana momba ny tsenan’omby fa toa mandeha ho azy fotsiny.
Ankoatra izay, ampiasana amin’ny fiavana tanimbary izy ireny. Mampanahy ny ho avin’ny omby any amin’ny faritra Menabe, mihena hatrany. Kamio ampolony isan’andro, tonga any Miandrivazo sy kaominina hafa mitatitra omby hoentina aty an-dRenivohitra.